ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့တွင် ကိုယ်ပိုင်စာပေ သီးခြားရှိသည် ။ သီးခြားစာပေရှိသော်လည်း ဖတ်တတ်သူ နည်းလှသည်။ပအိုဝ်းစာပေသည် ကရင်စာပေထက် ရှေးဦးကျသည်ဟု ဆို၏ ပအိုဝ်းစာပေ ဗြဟ္မီအက္ခရာပွား
ဖြစ်ပြီး၊ရှေးဟောင်းမြန်မာ အက္ခရာအသတ်၊ အစပ်များနှင့် နီးစပ်သည်။စာမူမှာ(၂)မျိုးကွဲလျက်ရှိသည်။ ၄င်းတို့
မှာ ရှမ်းပြည်မူ(တောင်ကြီး)နှင့် အလံတရာမူ(သထုံကြီး)တို့ဖြစ်သည်။စာအားဖြင့် ရေးသားခြင်းထက် အလကာင်္ဖြင့် ရေးသားခြင်းကိုပို၍နှစ်သက်ကြသည်။
ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့တွင် အက္ခရာအထူးအခြားမရှိပေ။ မြန်မာအက္ခရာကိုသာ ယူပြီးသုံးစွဲခဲ့၏ အက္ခရာ
တီထွင်မှုမပြုဘဲ နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာ သုံးစွဲခဲ့သည်မှာ ယနေ့တိုင်ပင်ဖြစ်၏ မြန်မာဗျည်းသရများကိုပင် သုံးစွဲသည်။သရများကိုပအိုဝ်းအသံထွက်နှင့်ညီအောင်ပြန်လည်တီထွင်၍သုံးစွဲကြသည်။ထို့ပြင်ပအိုဝ်းစာပေ သည်မြန်မာစာပေပင်မ မှ ခွဲထွက်သော စာပေ အခက်အလက် တစ်ခုဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် သ၊စ၊ရ တို့
သည် မြန်မာအသံထွက်နှင့်မတူပေ။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့က သ ကို စ ဟုလည်းကောင်း စ ကို ကျ ဟု
လည်းကောင်း အသံထွက်လေသည်။ထို့ကြောင့်မွန်အသံထွက်နှင့်တူလေသည်။ ရ ကို ra သံဖြင့် ပြောကြ
ပအိုဝ်းစာပေတွင် လောကုတ္တရာစာပေက ပို၍များ၏ လူမှုရေးစာပေနည်းလေသည်။ သို့သော်လောကီ
ဆိုင်ရာကျမ်းများ၊ဗေဒင်၊နက္ခက်၊စီးပွားရေး ပညာရေး စာပေများကိုလည်း ပအိုဝ်းစာပေတွင်တွေ့နိုင်ပေ သည်။လောကုတ္တရာ နှင့်ပက်သက်သော ကောင်းနိုးရာရာ ပါဠိစာများကို ဘုန်းတော်ကြီးများက၊ပအိုဝ်း
ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရေးကြ၏ ထို့ကြောင့် ပအိုဝ်းစာပေကို ဘုန်းတော်ကြီးများ ဦးပဉ္စင်းများ၊ရဟန်းလူထွက်
စားသော အရပ်သားများလည်း ရေးသားပြုစုကြ၏ ပအိုဝ်းစာဟောဆရာများ၊ သာမန်အရပ်သားများသည် စာတိုလင်္ကာသွားဖြင့်သာ ရေးသားဖွဲ့ဆိုကြသည်။ ယခုအခါကျေးဇူးရှင် အလံတရာဆရာတော်ဘုရားသည်
ပိဋိကတ်သုံးပုံကို ပအိုဝ်းဘာသာသို့ အားထုတ်ပြန်ဆိုနေသည်။
ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်း ဆင်းလာကြသော ပအိုဝ်းမ လေးများ
တောင်တွင်းမြို့ ပထမ တောင်ကျောင်းကြီးတွင် ရှမ်းပြည်မူ(တောင်ကြီး)စာကိုပုံနှိပ်စက်သည် ပအိုဝ်း
စာပေသာမက မြန်မာ၊ရှမ်းဘာသာများဖြင့်လည်း ပုံနှိပ်ပေးလေသည်။ ရှေးကမူ ပအိုဝ်းစာကို ပေပုရပိုက်များ
ပေါ်တွင် ရေးကြ၏ နောင်တွင်ရှမ်းစက္ကူကိုခေါက်၍ နှစ်ဘက်စလုံးတွင်ရေးကြ၏
ပအိုဝ်းစာပေကိုခေတ်သုံးခေတ် ပိုင်းခြားနိုင်သည်။ပထမ ခေတ်မှာ သထုံပြည် မင်းဆင်များထွန်း
ကားချိန် ဖြစ်၏ ဒုတိယခေတ်မှာ သထုံကလေးခေါ် ရှမ်းပြည်နယ် ဆီဆိုင်မြို့ကိုပြန်လည်၍ အစပျိုးချိန်ဖြစ်
၏ တတိယခေတ်မှာ မျက်မှောက် ခေတ်ကာလဖြစ်သည်။
ပအိုဝ်းစာပေမှာ အနော်ရထာမင်းနှင့်အပြိုင် သထုံဘုရင် မနူဟာမင်းဆက်များ လက်ထက်ကပင်
ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ သို့သော် ထိုခေတ်ကစာပေအထောက်အထားများကို အလွယ်တကူ မတွေ့နိုင်တော့ပေ။ပအိုဝ်းသက်ကြီးဝါကြီးများ၏ အဆိုအရ ပအိုဝ်းစာပေ ပထမ ခေတ်သည် မနူဟာမင်းဆက် ပျက်သွားသည်မှစ ၍ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ကာ သိမ်ကောသွားရသည်ဟုဆိုသည်။
သက္ကရာဇ် ( ၄၁၉) ခုနှစ်တင် သထုံပြည်ကို အနော်ရထာမင်းလာရောက်တိုက်ခိုက်၍ သထုံပြည်ပျက်
သွား၏ သထုံပြည်ပျက်သွားသောအခါ ပအိုဝ်းများသည်အထက်မြန်မာပြည်အရပ်သို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်။ရှမ်း
ပြည်တောင်ပိုင်းသို့အများဆုံးပျံ့နှံ့ရောက်ရှိကြသည်။ အချို့လည်းနယ်စပ်ကိုကျော်လျက် ယိုးဒယားသို့ ၀င်
ရောက်သွားကြ၏ သထုံတစ်ဝိုက်၊ဖားအံတစ်ကြောတွင်ကျန်ရစ်သည်လည်းရှိကြသည်။ ၄င်းတို့အနက်ရှမ်း
ပြည်ရောက်အုန်စုများမှာ ပအိုဝ်းစာပေ ဒုတိယခေတ်ကို တည်ထောင်သူများပင်ဖြစ်ကြသည်။ဤအုပ်စုသည်
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် သထုံကလေး (ယခုဆီဆိုင်မြို့)ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြ၏သထုံကလေးခေါ်ဆီဆိုင်မြို့
ကိုတည်ထောင်ရာတွင် ပအိုဝ်းဘာသာဖြင့် ပအိုဝ်းဘာသာဖြင့် ကမ္ဗည်းစာတမ်းများရေထိုးခဲ့ကြသည်ဟုဆို
သည်။သို့သော် ထိုစာတမ်းများ ကမ္ဗည်များ၊မှတ်တမ်းများကို ယခုအခါမတွေ့ရတော့ချေ။ ၄င်းတို့ကိုတွေ့ပါမူ
ပအိုဝ်းစာပေဒုတိယခေတ်ကိုစတင်ပျိုးထောင်ပေးသူမှာ အင်းလေးဒေသ နန်းပန်ရွာတောင်ဘက်ရှိ
ပြန်လွန်တော်မူပြီး)သာသနာရေးနှင့် နွယ်၍ ပအိုဝ်းစာပေပြန်လည်ထွန်းကားရေးကို ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့
သည်။ဆရာတော်သည် မိမိ၏ အလှူဒယကာ ဒါယိကာမများအား သေချာရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက် နား
လည်စေလို၏ ထို့ကြောင့်အခါကြီး နေ့ကြီးများတွင် ကျောင်းတတ်လာသောပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများအား
၊ဒါနအကျိုးကို ပအိုဝ်းဘာသာ၊ပအိုဝ်းစာဖြင့်ဟောကြားတော်မူသည်။ဤသို့ဖြင့် လူအများသည် ကုသိုလ်ရေး
ဆရာတော်သည် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့တွင် စာပေ ဟူ၍ တသီးတသန့်ရှိကြောင်း သထုံပြည်ကြီးပျက်
သောအခါစာပေပျောက်ကွယ်တိမ်ကောရကြောင်း၊စာပေသည် လူမျိုးတစ်မျိုးအတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်
ကြောင်းနှင့်ပအိုဝ်းစာကို ပြန်လည်သင်ကြားရန်လိုကြောင်း စသည်ဖြင့် အမြဲတန်းဟောကြားတော်မူလေ့ရှိ
သည်။ဤသို့ဖြင့် ပအိုဝ်းစာပေမျိုးစေ့သည် အညှောက်ပေါ်လာသည်။
မိုင်းပျိုးဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ဘုရားပျိုးခဲ့သော စာပေမျိုးစေ့ကိုဆက်လက် မြေတောင်မြောက်ပေးသူမှာ
ဆီဆိုင်မြို့အနီးတွင်ရှိသော နောင်ဟိုင်းရွာမှ နောင်ဟိုင်းဆရာတော်ဘုရားပင်ဖြစ်သည်။ နောင်ဟိုင်းဆရာ
တော်ဘုရားသည် ပအိုဝ်းဘာသာဖြင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာစာပေများကို ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ လောကုတ္တရာ
စာပေကိုသာအရေးများပြီး လောကီရေးရာစာပေများကိုရေးသားခြင်းမရှိလှဟု သိရသည်။ ဆရာတော်ရေး
သားပြုစုခဲ့သောစာများမှာလည်းခေတ် အဆက်ဆက် ထိန်းသိမ်းမှုမရှိခြင်းကြောင့် ယခုအခါမတွေ့ရတော့
ပေ။သို့သော်ဆရာတော်ကြိုးစား အားထုတ်သင်ပြမှုကြောင့် နောက်လူတို့ အတော်များများ ပအိုဝ်းစာကို
ဤသို့ဖြင့်ပအိုဝ်းစာပေတည်းဟူသော သစ်ပင်သည် တဖြည်းဖြည်း ရှင်သန်ကြီးထွားခဲ့၏ တောင်ကြီး
ခရိုင်တောင်ဘက်ပိုင်းမှ တောင်ကြီးခရိုင် အနောက်ပိုင်းရှိ အောင်ပန်းဟဲဟိုးတစ်ဝိုက်သို့ တဖြည်းဖြည်းပျံ့နှံ့
သွားသည်။တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဆက်၍ပျံ့ပွားလာရာ တောင်ကြီးခရိုင်တစ်ခုလုံးတွင် ပအိုဝ်းစာကို အတော်များ
များတတ်မြောက်လာကြသည်။ မော်ဟုခေါ်သောပအိုဝ်းစာဟောဆရာများအတွက်စာဟောရာတွင်
အထောက်အကူရစေရန် ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ ငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ် နိပါတ်တော်များကို ပအိုဝ်းဘာသာဖြင့်
ရေးသားပြန်ဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဒုတိယစာပေခေတ်သည် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ ပညာရေးကိုသာ
မက ဘာသာရေးကိုပါ တိုးတတိလာစေသည်။ မော် ခေါ်စာဟောဆရာများသည် ပအိုဝ်းစာပေတည်းဟူ
သောသစ်ပင်၊ဆက်လက်ရှင်သန် ကြီးထွားအောင် မြေသြဇာကျွေးသူများဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။
နောင်ဟိုင်းဆရာတော်၏ နောက်တွင်ဆရာတော်၏တပည့်ဖြစ်သည့် ဆောင်းပလောင်းဆရာတော်က
ပအိုဝ်းစာပေအပင်ငယ်ကို ဆက်လက်ရေလောင်းပေးသည်။ဆောင်းပလောင်းရွာမှာ ပင်လောင်းမြို့၏
တောင်ဘက်တွင်ရှိ၏ ဆောင်းပလောင်းဆရာတော်သည်လည်း နောင်ဟိုင်းဆရာတော်နည်းတူ ပအိုဝ်းစာ
ဆောင်းပလောင်းဆရာတော်ပြီးနောက်တွင် ဆောင်းပလောင်းရွာအနီးတွင်ရှိသော ဘန်းပုံရွာမှ ဘန်းပုံ
ဆရာတော် ဦးသီလ၀ံသက ဆက်လက်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ဘန်းပုံဆရာတော်ရေးသားသောစာများကိုလည်း
ယခုအခါ အစရှာမရတော့ပေ။ဂျပန်ခေတ်အတွင်း က ပျက်စီးကုန်သည်။
ဘန်းပုံတရာတော်၏နောက်တွင် ပအိုဝ်းစာပေ ဖခင်တစ်ဦးဟုဆိုနိုင်သော ပအိုဝ်းစာဟောဆရာ မောင်ပုညလုံး က စာဟောခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ စာရေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပအိုဝ်းစာပေဆက်လက်
ပြန့်ပွားအောင်ကြိုးစားခဲ့သည်။မော်ပုညလုံးသည် လင်္ကာများ၊အတိတ်တဘောင်များကိုပါ ရေးသားခဲ့သည်။
၄င်းရေးသားခဲ့သောစာများကို ယနေ့တိုင် တွေ့နိုင်ပေသေးသည်။
အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေးဦးသည် ညှိုးမှိန်သွားခဲ့သော ပအိုဝ်းစာပေပင်စည်ကြီးကို၊တစ်ဖန်ပြန်လည်လန်း
ဆန်းအောင်ပျိုးထောင် မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့ကြသည် ။ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့၏ ကျေးဇူးကြောင့် ယခုအခါ
ပအိုဝ်းစာပေပင်စည်ကြီးသည် အကိုင်း၊အခက်၊အရွက်၊အဖူး၊အညွန့် ဝေေ၀ဆာဆာဖြင့် ပြန်လည်ရှင်သန်
ထိုအချိန်မှစ၍ ပအိုဝ်းစာကို ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့က ကောင်းစွာလက်ခဲသုံးစွဲခဲ့ကြသည်။လူထုက လက်ခံ
သုံးစွဲခဲ့သော်လည်း ၄င်းစာတွေ ပျော့ကွက်ဟာကွက်များ ရှိနေသည်။တီထွင်မှုဟူရာတွင် ချွတ်ယွင်းချက်
များ ရှိစမြဲပင်ဖြစ်သည်။ထိုစာ၏ ပျော့ကွက်၊ဟာကွက်မှာ စာလုံးတစ်လုံးကိုဖတ်ရာတွင် အသံ လေးငါးမျိုး
ဤငသို့အသံအမျိုးမျိုး အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးထွက်နေခြင်းသဖြင့် ပအိုဝ်းစာကိုမကျွမ်းကျင်သေးသူများ
အတွက် အခက်အခဲသဖွယ်ဖြစ်ပေသည်။ သုံးစွဲရာတွင်လည်းတိကျမှုမရရှိပေ။ထို့ကြောင့်ထိုအခက်အခဲကို
ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် စာပေပညာရှင်များ သံဃာတော်များက ပို၍ကောင်းမွန်မည့် အများလက်ခဲအသုံး
ပြုနိုင်မည့် စာမူသစ်တစ်ခုကို တီထွင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။
ယခုတောင်ကြီး၊ပထမတောင်ကျောင်းကြီး ကျောင်းတိုက်ရှိ၊ပအိုဝ်းစာ ပုံနှိပ်တိုက်မှရိုက်နှိပ်နေသောစာမူ
ကို တတိယစာပေခေတ်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်။ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ပအိုဝ်းတိုင်းရသားများ ပုံနှိပ်နေသော ပထမ
တောင်ကျောင်းကြီးရှိယခုစာမူကို ၁၃၁၂ ခု၊ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၄ ရက် ကြာသပတေးနေ့တွင် တောင်ကြီး
မြို့၊ ကံဦးကျောင်း၌၊ပအိုဝ်းစာပေ မူသေ ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကို အောက်ပါဆရာတော်များပါဝင်သောအဖွဲ့
ကို ဖွဲ့စည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ပအိုဝ်းစာပေ မူသေ ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သောဆရာတော်များမှာ
(၁၀) ကံဦးကျောင်းဆရာတော်ဘုရား တို့ဖြစ်ကြသည်။
အထက်ပါဆရာတော်ဘုရား ၁၀ ပါးကို ပအိုဝ်းစာပေမူသေ ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဟူသော အနည်ဖြင့် သဘောတူဖွဲ့စည်းခဲ့ကြ၏ ဤစာပေမူသေဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ၁၃၁၂ ခု ၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၈ ရက်၊တနလာင်္နေ့ နံနက် ၈ နာရီအချိန်တွင် တောင်ကြီးမြို့၊ ပထမ တောင်ကျောင်း
ကြီး၌ ပအိုဝ်းစာပေမူသေကို ရှေးဦးစွာ ဖြစ်မြောက်ပေါ်ထွက်အောင် အဘက်ဘက်မှ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေး
ထိုအစည်းအဝေးကို ကြွရောက်တော်မူကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ -------------
(၂) ပါမိုးနဲ ကျောင်းဆရာတော်ဘုရား
(၇) ကံဦးကျောင်းဆရာတော်ဘုရား တို့ဖြစ်ကြသည်။
အထူးကြွရောက်၍ အားပေးတော်မူခဲ့ကြသော ဧည့်သည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ----------------
(၁) သထုံဆီဆိုင်စော်ဘွားကြီး သခင် တကာ ခွန်စိန်း
(၄) ပအိုဝ်းဝန်ကြီးဦးဘိုးခင် တို့ဖြစ်ကြသည်။
(၁) နောင်ကားကျောင်းဦးပဉ္ဇင်း ၀ါရိန္တ
(၂) ဟိုနားဦးပဉ္ဇင်း တို့ဖြစ်ကြသည်။
ထိုအစည်းအဝေး မှ အောက်ပါ အချက်များကို ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
၁။ ပအိုဝ်းစာပေမူသေဖြစ်မြောက်ရေးတွင် မြန်မာစာ၊ယိုးဒယားစာ၊သီဟိုဠ်စာ၊အင်္ဂလိပ်စာ၊သက္ကတ ဘာသာ စသည်ဖြင့် ဘာသာစာပေ အမျိုးမျိုးအထွေထွေရှိသည်။ တို့တွင် ရှေးဦးစွာ မြန်မာစာပေ ကိုသာ မူတည်၍
၂၊ ထိုကဲ့သို့မူသေထုတ်ဝေရာတွင် ပါဠိဘာသာ နည်းနာစဉ်အတိုင်း ကဂိုဏ်း၊ ပယတ်၊ ဌာန်စသော သဒ္ဒါနည်းတို့ကို မှီး၍ ရှေးဟောင်းပအိုဝ်းစာပေများကိုလည်း ပျက်စီးပပျောက်ခြင်းမရှိစေဘဲ အသံစုံစုံ လင်
အသံစုံလင်ရေးနှင့် ပက်သက်၍ မြန်မာစာသင်ပုန်းကြီး အက္ခရာအတိုင်း အောက်ပါပုံစံအတိုင်း သင်္ကေတ
နှစ်ခု တိုး၍ ထုတ်ဝေရန်။
(၁) က က က
(၂) ကာ ကာ ကာ ကာ့ ကား
(၃) ကိ ကိ ကိ
(၄) ကီ ကီ ကိ ကီ့ ကိး
(၅) ကု ကု ကု
(၆) ကူ ကူ ကူ ကူ့ ကူး
(၇) ကေ ကေ ကေ ကေ့ ကေး
(၈) ကဲ ကဲ ကဲ ကဲ့ ကဲး
(၉) ကော ကော ကော ကော့
(၁၀) ကော် ကော် ကော် ကော့် ကပ်
(၁၁) ကံ ကံ ကံ ကံ့ ကံး
(၁၂) ကာ ကား ကား
အထက်ပါဥပမာ အတိုင်းအသံစုံလင်အောင် ပြုလုပ်လိုက်သဖြင့် အသံပို၍စကားလိုလာ၏ အသံလို၍ စကားပိုအဖြစ်သလို့မရောက်နိုင်ကြောင်း ယူဆကြသည် ။အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကော်မာခေါ် ဖွတ်နုတ် ပဲပင်ပေါက်ပုံသဏ္ဍာန်သင်္ကေတဖြင့် အသံနှစ်မျိုးတိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် စာဟောင်းမပျက်ခြင်း၊အသံစုံလင်
ခြင်း၊ပုံနှိပ်ရန်လွယ်ကူခြင်းစသော အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု ယူဆကြသည်။ ယခုရှေးဦးစွာ
စာပေမူသေထားရှိရေးအတွက် အထက်ပါ ဥပမာ အတိုင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် ဆုံးဖြတ်တော်မူခဲ့ကြသည်။
အထက်ပါစာပေမူသေပုံစံအတိုင်း ပုံနှိပ်ဖြစ်မြောက်ဖြန့်ဝေရေးနှင့် အစိုးရအသိမှတ်ပြုရေးအတွက် ၀န်ကြီးဦးဘိုးခင်ပါဝင်သော အောက်ပါအဖွဲ့ကိုအာဏာကုန် လွှဲအပ်လိုက်သည်။ အာဏာကုန်လွှဲအပ်ခံရ
သောအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ---------------
၄။ ပင်စုံတောရဆရာတော်ဘုရားတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဤဆရာတော်ဘုရားများအပြင်၊ ပအိုဝ်းဝန်ကြီးဦးဘိုး
ဤအဖွဲ့မှရေးဆွဲသောပအိုဝ်းစာမူသည် ပထမစာပေမူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု၍သင်ကြား၏ ဤစာပေမူ
ကိုကျောက်ပုံရိုက်နှိပ်ပေးရေးအတွက် ကံဦးကျောင်းဆရာတော်ဘုရားအား တာဝန်ပေးအပ် ညွန်ကြားတော
အလံတရာစာမူကိုတီထွင်ရေးသားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ သပြေတန်းကျောင်းမှ ဆရာတော် ဦးနန္ဒ၀ံသ ဖြစ်၏
ဤအလံတရာစာမူ မူလပအိုဝ်းသင်ပုန်းကြီးစာ၌ သံပြည့်သရ ၁၆ လုံးသံဝက်ဗျည်း ၃၃ လုံးရှိ၏ ထို့ပြင်အသံ
ထွက်ထူးခြားစေသည့် အမှတ်သင်္ကေတ ၄ မျိုးတို့ကိုမူတည်ထားသေး၏ စာလုံးများ၊ စာတန်းများ ရှေ့
နောက် အစီအစဉ်ထားရာ၌လည်းကောင်း၊အခန်းကဏ္ဍများဖွဲ့စီးရာ၌လည်းကောင်း သရများ၊ ဗျည်းများ ရှေ့နောက် အစီအစဉ်အတိုင်း ခွဲခြားထားသည်။
ဤစာမူသည်ပအိုဝ်းဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းနှင့် အသံထွက်ဟူသမျှကိုရေးသားနိုင်၏ စာလုံးတစ်မျိုး
တည်းနေရာဌာန ကိုလိုက်၍ အသံထွက်နှစ်မျိုး ၊ သုံးမျိုး ကွဲပြားခြင်းမရှိပေ။ထို့ကြောင့် ခန့်မှန်းအသံထွက်၍
ဖတ်ရသည့် ချွတ်ယွင်းမှုမှ လုံးဝကင်းရှင်းလေသည်။
အ အာ ဣ ဤ ဥ ဥု ဥ ဥု အို အို အဲ အဲ ဧ သြ သြ အံ
_____ . ______း _______၊
အခြခံသရများတွင် က ဗျည်း သွင်းထားသည့်ပုံစံ
က .က ကာ .ကာ့ ကား ကာ၊
ကိ .ကိ ကီ ကီ ကီး ကီ
ကု .ကု ကူ .ကူ ကူး ကူ
ကု .ကု ကူ ကူ ကူး ကူ
ကို့ ကို့ ကို .ကို ကိုး ကို
ကဲ့ .ကဲ. ကဲ .ကဲ ကဲး ကဲ
ကေ. ကေ. ကေ .ကေ ကေး ကေ
ကော့ .ကော. ကော .ကော ကေား ကော
ကံ့ .ကံ. ကံ .ကံ ကံး ကံ
ယခုအခါ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ ပအိုဝ်းစာမူသည် အလံတစ်ရာမူ ၊တောင်ကြီးစာမူ ဟူ၍ နှစ်မျိုးကွဲပြားနေသည်။ ထို့ကြောင့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား ပညာတတ်လူငယ်များက မြေပြန့်နေ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသား ရော၊ တောင်ပေါ်နေ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများပါ ပအိုဝ်း စာမူတစ်ခုတည်း ရှိရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကို စိုင်းပြင်းလျက်ရှိသည်။
ပအိုဝ်းတိုင်းရင်သားတို့တွင် ကိုယ်ပိုင်စာပေရှိ၏ ပအိုဝ်းစာမှာ မြန်မာဗျည်းသရများကို အခြေခံ၍၊ ပအိုဝ်းအ
သံဖြင့်တီထွင်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားစာဆိုတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာ မှတ်သားစရာ၊ လိုက်နာစရာများကို၊ ပအိုဝ်းဘာသာသို့ပြန်ဆို၍ လင်္ကာသွားဖြင့် ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားကြ၏
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိငုင်ရာ စားများသာမက ရှမ်းပုံပြင်ရာဇ၀င်များ၊မိမိတို့ တိုင်းရင်းသား အကြောင်းဆိုင်ရာပုံပြင်
ရာဇ၀င်များကိုလည်း ၊ ပုရပိုက်ပေါ်တွင် ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထား၏ သို့သော်အများအားဖြင့် ဇာတ်တော်၊
နိပါတ်တော်များကို ရေးသားထားသည်က များလေသည်။
ပအိုဝ်းပုရပိုက်စာများကို ရေးသားသူများမှာ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားစာဆိုများပင်ဖြစ်၏ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်း
သားတို့သည် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရိုးရိုးစကားပြေဖြင့် ရေးသားသူကနည်းပြီး လင်္ကာသွားဖြင့်ရေး
သည်က များလေသည်။ ထို့ကြောင့်ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့သည်ကဗျာ၊လင်္ကာ ခုံမင်နှစ်သက်သူများဟုဆို
နိုင်သည်။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ ပုရပိုက်စာ အရေးအသားကို လေ့လာတင်ပြလိုပါသည်။
"ဇေယျတုသဗ္ဗမင်္ဂလံ၊ နမောတဿ၊ ဘဂ၀တော၊အရဟတော၊သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသ၊
တိသရဏံ၊အဟံဝန္နေ ၀န္ဒာမိ၊ရှစ်ခိုးပါ၏ ဘုရား။ ။ဟန်တလိင်ခါယို၊ခွေသွန်းရိုပ်ဝ်သေ၊
ကိုဝ်တွယ်ငါရီးရီး၊ဘုရား၊တရား၊ပါတွံသင်္ဃာ၊ဇိနဗွန်တိုဝ်၊လူလိုဝ်ဆရာ ဗြဟ္မာအအေ့ ဖြော့
တန်တှဲဖါ၊တီပါကျွန်ဦ၊ဘုံတူအရဟံ၊သွံတန် ရတ္တနာ ၊ ဘုရာနောင်အစ "
ဤအပိုဒ်မှာပအိုဝ်းစာဆိုတစ်ဦးရေးသားသော ပုရပိုဒ် တစ်ဆူမှ အချီးစကား တစ်ပိုင်း တစ်စဖြစ်ပါသည်။
ဤအချီးစကားကိုကြည့်လျှင် ပအိုဝ်းစာဆိုတို့သည် စာရေးရာတွင် ရှေးမြန်မာ ကျောက်စာများနည်းတူ
ရတနာ သုံးပါးကို ဦးထိပ်ထား၍ ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရ၏ ထို့နောက် စာဆိုသည် မိမိအဘယ်
ကြောင့် ဤဇာတ်တော်၊ နိပါတ်တော် ရေးရသည် ဟူသည့် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ရေးသားလေ့ရှိသည်။
မြန်မာစာအုပ်များတွင် ပါရှိတတ်သည့် အမှာ အချီးစကား ၊ နိဒါန်းစကားပင်ဖြစ်၏
ထို့နောက်အကြောင်းအရာကို ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲ၍ ရေး၏ မြန်မာပျို့များကဲ့သို့ပင်ဖြစ်၏ သို့သော်အချို့နေရာများတွင် စာဆို၏ ဥာဏ်ကွန့်မြူးမှုကိုတွေ့ရ၏ ဥပမာ ကလေးချော့ခန်းတွင် မိခင်၏ ကလေးချော့ဟန်များ ကလေးချော့ရာတွင် မိခင်သီဆိုသော သီချင်းကို စာဆိုသည် သူဥာဏ်ကွန့်မြူး
နိုင်သလောက် ရေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ပအိုဝ်းစာဆိုတို့သည် ပုရပိုဒ်စာကို ရေးရာတွင် လေးလုံးစပ် လကာင်္ဖြင့် ရေးထားသည်ကိုတွေ့ရ၏
ရှင်မဟာသီလ၀ံသ၊ရှင်မဟာရဌသာရ စသည့် စာဆိုတို့သည် ဇာတ်တော်ကိုမှီး၍ လေးလုံးစပ်လင်္ကာဖြင့်
ရေးထားသော လင်္ကာရှည်ကြီးကို ပျို့ဟုခေါ်လျှင်၊ ပအိုဝ်းစာဆိုတို့သည် ဇာတ်တော် ၊နိပါတ်တော်ကို
မှီး၍ ရေးထားသော ပုရပိုက်စာ လင်္ကာရှည်ကြီးကို လည်း ပအိုဝ်းပျို့ဟု ခေါ်နိုင်သည်။ခေါ်သင့်၏ ပုရပိုက်
စာကို လေးလုံးစပ်လင်္ကာဖြင့် ကာရန်အချိန်အဆက်မိအောင်ရေထားကြောင်းသာဓက ဆောင်ပါသည်-----
ကွင်းဖြင့်ပြထားသောစကားလုံးများမှာ ကာရံတူ အသံတူများပင်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ပအိုဝ်း တိုင်းရင်း စာ
ဆိုတို့ ယနေ့တိုင် ရေးသားနေကြသော လင်္ကာအရေးအသားသည် မြန်မာကဗျာလင်္ကာအရေးအသားကို
အတုယူလေသလောဟု စဉ်းစားဖွယ်ရာပင် ဖြစ်ပါသည်။သို့သော် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့သည်လူပျိုလှည့်
သောအခါတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် လင်္ကာသွားဖြင့် စကားအပြန် အလှန်ပြောဆိုကြသည်။
ဤသည်ကိုထောက်လျှင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့သည် လင်္ကာသွားဖြင့်စာမရေးမီကပင် လင်္ကာနှောသော
စကားကို ပြောဆိုကြပြီး ဖြစ်လေသည်။
ပုရပိုက်စာ၏ အဆုံးတွင် ဆုတောင်းစာ ဟန်မျိုးကိုတွေ့ရ၏ ထိုဆုတောင်းစာဟန်ကို ဖော်ပြပါအံ့ -------
"တရာတော်လိတ်ယိုဝ်၊ ဟောဝ်ရိုဝ်ထေ၀်းသိဝ်၀ွိုဝ် တွယ်တွိုင့်ကောလှူ ၊ စိတ်ဖြူသဗွာ၊
နောင်ခါမော့လင် ပကျောင်ပကျောင် ၀ါရိန္တ၊ရပ်မင်လံးအုံဓ ဒုံတန် ကျောက်တန်၊
သင်္ကန်-မက ကြီဗါထေရ်ရ၊ အာမတ္တ၀ိန်ခံ ၊ကြွစံနိဗ္ဗာန် ၊မှံမှံယံဖေး၊စာတကာတတမာဝေါ
ကလဗါကွိုင်နဲ ဗွေးသြော ၊ သာဓု သာဓု သာဓု
မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်မှာ ဤတရားစာမှာ အလောင်းတော်စောင်းစိန်ပို့ အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ဤစာကို
စိတ်ထားဖြူစင်စွာဖြင့် လှူဒါန်းကြသော ကျောက်တန်းရွာနေ ဦးကျောင်း ၀ါရိန္တ၊ဇနီးကျောင်းအစ်မ ဖြူတို့
သည် ဤစာကိုလှူရသဖြင့် အသက်ရှည်ခြင်း ၊ အဆင်းလှခြင်း၊စိတ်၏ချမ်းသာ ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်းတို့ကို
အမှန်ရပါစေသတည်း။နောင်ဘ၀တွင်လည်း ကံ့ကော်ပင်အောက်ရှိ ပတ္တမြားပလ္လင်တွင် ပွင့်တော်မူမည့်
အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်ရပါစေသတည်း။ စာတကာ လင်မယားသည် နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါစေ
သတည်း ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ဤဆုတောင်းစာမျိုးကို ပုရပိုက် စာ၏ အဆုံးတွင် တွေ့တတ်၏ ပုရပိုက်စာကိုရေးသားသူ ပအိုဝ်းစာဆို
သည် မိမိထံ ပုရပိုက်စာကိုဝယ်သောသူအား ဤသို့ဆုတောင်းပေးတတ်ကြပါသည်။ ပုရပိုက်စာကိုဝယ်ယူ၍
လှူဒါန်းသူကလည်း ဤအကျိုးများရပါစေဟူသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၀ယ်ယူလှူဒါန်းကြပါသည်။ပုဂံခေတ်
ကျောက်စာများတွင်တွေ့ရသောအလှူရှင်၏ ဆုတောင်းပုံမျိုးနှင့်တူပေသည်။ အချို့ပုရပိုက် အိမ်တွင် ၀ယ်ယူ ပူဇော်ထားရှိကြ၏ သို့သော်ယခုအခါ ဤအယူအဆ အလေ့အထများ မရှိတော့ပြီ။
ကျေးလက်တောရွာများတွင် အလုပ်အားချိန်များ၌လည်းကောင်း၊ဥပုဒ်နေ့များ၌လည်းကောင်း ပုရပိုက်
စာကို စာဖတ်တတ်သူအားဖတ်စေပြီး၊ကျန်သူများက စိတ်ဝင်စားစွာ နားထောင်ကြသည်။ပုရပိုက်စာဖတ်သူ
ကလည်းသံနေသံထားဖြင့် ဖတ်ရ၏ ၀မ်းနည်းစရာ အခန်းများတွင် ၀မ်းနညးမှုခံစားကြရသည်။သံဝေဂယူစ
ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ ပုရပိုက်စာများသည် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ စာပေအရေးအသား၊ပအိုဝ်း
တိုင်းရင်းသားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည်မှုတို့ကိုဖော်ပြနေသည်။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏
စာပေအရေးအသားဖော်ပြနေသော ပအိုဝ်းပုရပိုက်စာများကို ခေတ်ပညာတတ် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူငယ်